आँखा « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
अकुलोप्लाष्टिः स्वास्थ्य पनि, सौन्दर्य पनि
अकुलोको अर्थ आँखा र प्लास्टिको अर्थ बनाउने हो । यसले बढीभन्दा बढी आँखा र आँखाको वरिपरीका रोगहरुलाई सम्बोधन गर्छ । आँखामा धेरै भागहरु भएपनि अकुलोप्लाष्टीले समेट्ने भनेको आँखाको डिलको रोग,
दृष्टि पर्दामा असर
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । आँखाको लेन्सभन्दा पछाडिपट्टी हुने भिट्रियस जेलीको पछाडि रहेको भित्री तहलाई रेटिना भनिन्छ । आँखाको नानीको ठीक पछाडि लेन्स हुन्छ । रेटिना पातलो झिल्ली जस्तै हुन्छ ।
दृष्टि सम्वन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदन
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्व दृष्टि दिवसको एक दिन अगाडि ९ अक्टोबर २०१९ मा विश्वव्यापी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । दृष्टि सम्वन्धि यो विश्व प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमा
नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान स्थिति, चुनौति तथा भावी लक्ष्य
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । विगतको स्थितिको तुलना गर्दा नेपालको आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ । यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (एएए) को राम्रो नमूनाका रुपमा लिन सकिन्छ । दृष्टिविहीनता
हरेक घण्टा आँखाको दृष्टि कम हुँदै जाने समस्या ‘सापु’
सापु रोग एउटा मात्र आँखा रातो भएर देखिने समस्या हो । यो रोग दायाँ र बायाँमध्ये जुनसुकै आँखामा पनि हुनसक्छ । यो समस्यामा हरेक घण्टा आँखाको दृष्टि कम हुँदै जान्छ
नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको इतिहास
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । नेपालमा आँखा सेवा विकासको इतिहास लामो छ । नेपालमा राष्ट्रिय अन्धोपन सर्वेक्षण शुरु हुनुभन्दा पहिला नेपाल आँखा अस्पताल शुरु भएको हो । जब सन् १९७१ मा
नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुको भूमिका
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा अन्धोपन सर्बेक्षणका लागि खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाले नेपालमा आँखा उपचारमा मास्टर प्लानमा सहयोग पुर्यायो । यो सर्बेक्षणमा नेदरल्याण्ड्स सरकारको ठूलो आर्थिक सहयोग छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी
के हो मोतियाबिन्दु ?
उमेर तथा अन्य कारणले आँखाको नानीपछाडिको पारदर्शक लेन्स बादल लागेझैँ अपारदर्शक हुने र बाहिरको प्रकाश आँखाभित्रको दृष्टिपर्दासम्म पुग्न नपाई आँखाले देख्न नसक्ने अवस्थालाई मोतियाविन्दु भनिन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा आँखामा
आँखा सेवा विस्तारमा नेत्रज्योति संघको भूमिका
विगतमा नेपालमा आँखा स्वास्थ्यको स्थिति निकै दयनीय थियो । नेपालीहरुले आँखा उपचारको आधारभूत सुविधा नपाएर अन्धो हुनुपरेको थियो । यद्यपी आँखा स्वास्थ्यमा सरकारी प्रयासबाट मात्र सम्भव थिएन । यसैलाई दृष्टिगत
आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवाको कदर
प्रविधिको विकास सँगै आँखा बिरामीले पाउने सुविधाका बारे बताइदिनुस् न ? विगतमा मोतियाबिन्दु निकालेर ठूलो चश्मा लगाउनुपर्थ्यो । धेरैले इन्ट्रा अकुलर लेन्स खरीद गर्न सक्दैनथे । त्यो बेला यसको मुल्य